ဧပရယ်လ်ပူး @ ပူးတေ: May 2012
ခင်ရာ ဆွေမျိုး မြိန်ရာ ဟင်းကောင်းတဲ့
အမြဲတမ်းအပြင်မှာ ဝယ်စားနေတော့ တရုတ်ဆိုင်က ထမင်းဟင်းတွေစားရင်စား မစားရင်ခေါက်ဆွဲပြုတ် ဆန်ပြုတ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဘိုစာ အသားပြားအကြီးကြီးတွေကို ကင်မယ် အာလူးကြော်တွေ ပြောင်းဖူးတွေနဲ့ ဂေါ်ဖီထုတ်ကို မေရိုးနီးစ်တွေနဲ့သုတ်မယ် ဒါ ဒါတွေပဲ စားနေရတာ မြန်မာဆိုင်မှာ မြန်မာစာစားချင်လို့သွားစားရင် မုန့်ဟင်းခါးများသွားစားမိပြီဆို စားလို့ တဝက်မကုန်သေးဘူး ရင်တွေတုန် အသက်ရှူတွေကျပ်လာတယ်။ ပြီးရင် ခေါင်းတွေမူးလာတယ်။… ပြီးရင် တညနေလုံးရေတွေ ငတ်ပါရော… ဘာလို့ဆိုတော့ အချိုမှုန့်ရဲ့ တန်ခိုးတွေလေ.. သူများတွေအတွက်ကတော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်… မစ္စတာပီလဲ မဖြစ်ဘူး။ ပူးတေကတော့ မရဘူး အချိုမှုန့်စားတာနဲ့ အဲဒီ လက္ခဏာတွေပေါ်လာရောပဲ။ အသက်ရှူကျပ်တာများဆို ညအထိ အိပ်မရဘူး။ အချိုမှုန့် ရှောင်ချင်လို့ ချက်ထားပြီးသားတွေ မစားချင်ဘူး... အသုတ်မှာစားတယ်... အချိုမှုန့်လုံးဝမထည့်ဘူးပြောတယ်... အချိုမှုန့်လုံးဝမထည့်ရင် အရသာမရှိမှာစိုးလို့ နဲနဲတော့ထည့်နော်ဆိုပြီး မရမက ထည့်ပေးတဲ့ဆိုင်လဲရှိတယ်... ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကကြည့်နေတာ များသွားတာနဲ့ ချက်ချင်းပြန်နှုတ်ခိုင်းလိုက်တာ... အိုကေတယ် စားလို့ရတယ်... ခေါင်းလဲမမူးဘူး ရင်လဲမတုန်ဘူး။ ရေလဲမငတ်ဘူး။ အဲ ဒါပေမယ့် မနက်ကျရင်တော့ ပန်းမမဖြစ်ရော..ပူးတေကပဲ လမ်းမတော် မယ်နုနဲ့ ဘာတော်လဲ မသိဘူး။ တခြားလူတွေစားရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ကိုယ်စားရင်တော့ ပန်းရင် ပန်း မပန်းရင် တုန် နေတော့တာပဲ။ တခါလဲ မဟုတ် နှစ်ခါလဲ မဟုတ်ဆိုတော့ မြန်မာအစားစာကို အပြင်မှာ ဝယ်စားရမှာကြောက်လာရော။ ဟင်းကအစ အသုတ် မုန့်မျိုးစုံ ကိုယ့်ကို လုပ်စားတာ များလာတော့တယ်.. အရမ်းစားချင်လာပြီး လုပ်စားဖို့လဲ အချိန်မရဖြစ်လာမှသာ မလွှဲသာမရှောင်သာ ဝယ်စားဖြစ်တော့တယ်။ ဒါကြောင့် ပူးတေ အိမ်မှာချက်ပြီဆို တခြားအစားအသောက်တွေ သိပ်ချက်လေ့မရှိပဲ မြန်မာအစားစာကိုပဲ အပင်ပန်းခံ အလုပ်ရှုပ်ခံ ချက်စား (အဝစား)လေ့ရှိတယ်။ အိမ်မှာ ဘယ်လောက်စပ်တာတွေစားစား ချင်တာတွေစားစား တော်ရုံမပန်းဘူး... အချိုမှုန့်လဲ လုံးဝမသုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ တခါတလေ လိုအပ်မယ်ထင်ရင် နဲနဲပါးပါးသုံးပါတယ်...
အခုလဲ ပူးတေတို့ ချက်စားတဲ့ ညနေစာလေးတနပ်အကြောင်းရေးမလို့။ ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူပါပဲ။ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့ သခွားသီးရခိုင်သုတ်ပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ ပုဇွန်ဆီပြန်နဲ့ သခွားသီးသုတ်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ကြာဇံဟင်းခါး အကြမ်းချက်ကလေးပါပဲ။ ပုဇွန်ခြောက်ကြော်ကတော့ အရင်နေ့ထဲကကြော်ထားပြီးသားလက်ကျန်ပါ။
ပထမဆုံး သခွားသီး အလုံးကြီးတလုံးကို အရှည်လိုက် အလယ်ကနေ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီးတော့ အစေ့တွေထုတ်ပစ်ပြီး ခြစ်ပါမယ်.. ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်းလိုပုံစံမျိုးပါ.. သခွားသီးကတော့ အရေရွှမ်းတဲ့အသီးမို့လို့ အရည်တွေထွက်ပါတယ်။ အရည်တွေကို မညှစ်ပစ်ပါဘူး အသုတ်က အရည်လေးနဲ့ဆိုပိုစားကောင်းပါတယ်။
ပြီးရင် ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီး နံနံပင်လှီး (နံနံပင်အစား ပင်စိမ်းရွက်ရှိရင် ပင်စိမ်းရွက်က ပိုကောင်းပါတယ်) ပုဇွန်ခြောက်ကို ရေအမြဲဆေးပါတယ်။ လှန်းတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်တွေဘာတွေ ကပ်နေမှာစိုးလို့ပါ။ မျှင်ငပိ(ငပိစိမ်းစား)ကို ယောက်မနဲ့ မီးကင်ပါတယ်... ငရုတ်ကောင်းစေ့လေးတွေကို လှော်ပြီးတော့ ကျောက်ဆုံနဲ့ ထောင်းပါတယ်။ ငရုတ်ကောင်းအမှုန့်တွေ ကြိတ်ပြီးသားရောင်းပေမယ့် ဒါမျိုးလေး ကိုယ့်ကိုထောင်းမှ ရခိုင်သုတ်နဲ့ပိုတူမှာပါ။ ပြီးတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ကိုယ်အစပ်ကြိုက်သလောက် ဒယ်အိုးလေးထဲထည့်ပြီးတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းကို ရေမြုပ်ရုံလေးထည့်ပြီးတော့ ရေခမ်းတဲ့အထိပြုတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ငရုတ်သီးစိမ်း ဘယ်လောက်စားစား ဗိုက်မနာတော့ပါဘူး။ အဝင်ပဲ ပူပြီး အထွက်ကျ ပူရုံပဲပူပြီး ဗိုက်မနာ ဗိုက်မရစ်တော့ပါဘူး ။ :P
ပြီးတော့ ပုံထဲကအတိုင်း သံပုရာသီးလိုသလောက်လေးထည့်ပြီးတော့ အချိုမှုန့်ကြိုက်ရင် အချိုမှုန့်ထည့်ပါ။ ပူးတေကတော့ မထည့်တော့ပါဘူး။ ပုဇွန်ခြောက်ကချိုပြီးသားရော ငပိကလဲ အချိုဆိုတော့ အချိုမှုန့်ထပ်မထည့်တော့ပါဘူး။ ပြီးရင် လက်အိတ်လေးစွပ်နယ်ပြီး အပေါ့အငံ အရင်မြည်းပြီးမှ အငံပေါ့ရင် ထိုင်းငံပြာရည်လေး နဲနဲထပ်ထည့်ပြီး (ငံပြာရည်ကို ကြိုမထည့်တာက ငပိကလဲ တခါတလေကျရင် ငံနေတတ်တာရယ် တချို့ပုဇွန်ခြောက်ကအငံဓါတ်ပါနေတတတ်တာကြောင့် မြည်းကြည့်ပြီး အငံလိုမှ ထပ်ထည့်တာပိုကောင်းပါတယ်) ဆီပြန်အသားဟင်းလေးတမျိုးမျိုးနဲ့ သူနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဟင်းခါးလေးနဲ့ မြင်းခွာရွက်ဟင်းခါးဆို့ ဒန့်သလွန်ရွက် ဟင်းခါးတို့နဲ့ ပိုကောင်းပါတယ်ရှင်။ ပူးတေကတော့ အဲဒီအရွက်တွေ အဆင်သင့်မရှိတာနဲ့ပဲ ကြာဇံဟင်းခါးအလွယ်လေးချက်လိုက်တာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ တရှူးရှူးနဲ့ စားမြိန်မယ့် ထမင်းတပွဲကို စားသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(သခွားသီးသုတ် နယ်ပြီးစားရန် အသင့်။ လက်အိတ်နဲ့နယ်မှဖြစ်မယ် လက်ပူလိမ့်မယ်နော်။ သခွားသီးပေါ်က မဲမဲလေးက ငရုတ်ကောင်းစိကို လှော်ပြီးထောင်းထားတာပါ)
(ငရုတ်ကောင်းစေ့နဲ့ ငပိမီးကင်ရဲ့ အချိုးအဆကို သိရအောင်။ ပူးတေတို့က ၂ ယောက်ထဲဆိုတော့ ၆ လက်မလောက်အရှည်ရှိတဲ့ အလတ်ဆိုဒ် သခွားသီးတလုံးကိုခြစ်ပြီးသုတ်တာပါ)
(ပကာသန မပါတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထမင်းဝိုင်းလေး)
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 8:00 PM7comments
Draft ထဲက ပို့စ်လေးတွေ တင်လိုက်တာပါ... ပို့စ်တွေက Up to date ဖြစ်မနေပါဘူး... ဘလော့လေးအိပ်နေတာကြာလို့ အိမ်ဦးနတ်ကြီး ရဟန်းခံတုန်းက(၂၀၁၀ စက်တင်ဘာလောက်က) ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးနဲ့ ပြန်ဖွင့်လိုက်တာပါ....
ပူးတေနေကောင်းနေပါပြီ... ပူးတေကို အားပေးစကားပြော သတင်းမေးကြသော ဘလော့ အစ်ကိုအစ်မ မောင်နှမအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့...
စာမရေးနိုင်သေးတာက ပူးတေမအားပြန်ဘူး... မြန်မာပြည်က ဆွေမျိုးတွေ စင်္ကာပူ လာလည်တယ်... စင်္ကာပူမှာ နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေ မြန်မာပြည်အပြီးပြန်မှာမို့ တတ်နိုင်သလောက် လိုက်ကူညီတာမို့ အလုပ်အတော်လေးရှုပ်တယ်...
ပြီးတော့ အလုပ် ၂ ခုအကူးပြောင်းမှာ မစ္စတာပီကြီး ခွင့် ၁၄ ရက်လောက်ခံစားခွင့်ရလို့ ရဟန်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ ရဟန်းဝတ်ဖြစ်တယ်။ သူရဟန်းဝတ်တော့ ပူးတေက ရဟန်းအစ်မပေါ့နော်... :P
ရဟန်းဝတ်နေလို့ စနေတနင်္ဂနွေရက်တွေ ပူးတေကိုယ်တိုင် ချက်ပြီး ဆွမ်းသွားကပ်ရတယ်... ပြန်လာရင် နောက်ရက်ချက်ဖို့ ဝယ်ရတယ်....ပြီးတော့ နောက်ရက် ဆွမ်းချိန်မှီ ချက်ပြုတ်ပြီးစီးနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားရတယ်.... ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတွေအတွက် ဆွမ်းဟင်း ဆွမ်းထမင်းချက်၊ အချိုပွဲအတွက် မုန့်တွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်..တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်စာ ဧည့်သည်တွေအတွက် ဒန်ပေါက်ပဲအလွယ်ဆုံးမို့ အော်ဒါမှာလိုက်တယ်။ ဒါတောင် ချဉ်ပေါင်ဟင်းချက်၊ အချိုပွဲ၊ ဘာညာ ပြင်ဆင်ရသေးတာပဲပေါ့။... အိမ်က အတူနေအန်တီက ဆိတ်သားဟင်း၊ ပူတင်း အစရှိသဖြင့် သူကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးတာတွေရှိသလို ပူးတေလုပ်တာတွေကိုလဲ အန်တီက နေ့တိုင်း ကူညီပေးပါတယ်...အားလဲနာတယ်...နှစ်ဖက် သူငယ်ချင်းတွေလဲ လာကူကြတယ်...ပထမဆုံး ဆံချ(ဆံရိပ်) တဲ့နေ့ကတော့ ပိတ်ရက်ထိ စောင့်နေရင် ရဟန်းဝတ်ရမယ့်ရက် နည်းသွားမှာစိုးလို့ ကြာသပတေးနေ့ကြီး ဝတ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေကို မခေါ်တော့ဘူး... ခေါ်လဲလာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ... မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ အများစုကတော့ သိမ်ဆင်းလောင်းချင်ကြလို့တဲ့..ဒါပေမယ့် ဦးဇင်းက မစောင့်ချင်ဘူး။ မစောင့်နိုင်ဘူး။ သိမ်ဆင်းလောင်းတယ်ဆိုတာ သွားစရိတ်၊ လာစရိတ်၊ သိမ်ဆင်းလောင်းဖို့ ဝယ်ခြမ်းမှာနဲ့ သူများတွေကိုလဲ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ပေးသလိုဖြစ်မှာစိုးတယ်... အားနာပြီး ဖွင့်ရက်မှာပဲ သိမ်တက်လိုက်တယ်... ပူးတေနဲ့ အိမ်က အန်တီနဲ့ပဲ သိမ်ဆင်းလောင်းလိုက်ကြတယ်...အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်..
တိုးပါးရိုး ဘုန်းတော်ကြီးငါးပါးနဲ့ ဦးဇင်းမုနိန္ဒ သိမ်တက်တဲ့ ပုံတချို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်....အခွင့်မတောင်ရသေးပေမယ့် ခွင့်ပြုမယ်လို့ ထင်လို့ တင်ထားလိုက်ပါတယ်...း)
ဘုန်းကြီး ၉ ပါး (သင်္ကန်းအညိုနဲ့က ၄ ပါးက SMC က ၃ပါးနဲ့ ဦးဇင်းအသစ် ဦးဇင်းမုနိန္ဒ ၊ သင်္ကန်းလိမ္မော်ရောင်နဲ့ ၅ ပါးက တိုပါးရိုးကျောင်းကြီးက)
ဥုပဇ္ဇာယ် ဆရာတော် ဦးရာဇိန္ဒနဲ့ဘုန်းတော်ကြီး ၂ ပါး(တပါးက ရှစ်မိုင် မစိုးရိမ်ကျောင်းကတဲ့ တပါးက လပွတ္တာမြို့က)၊
အန်တီက ဘုန်းဘုန်းတွေအတွက် ကပ္ပိယလုပ်ပြီး သိမ်ဆင်းလောင်းထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ကောက်သိမ်းပေးနေတာ.. :P
ဦးဇင်းဘွဲ့အမည်က ဦးဇင်းမုနိန္ဒ တဲ့ .... (ရဟန်းမဝတ်ခင် တရက်က အရင်ဘွဲ့အမည်က မုနိန္ဒတဲ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ပြောသွားသေးတယ်...)
ဘုန်းကြီးတွေလဲ ကိုယ့်သပိတ်နဲ့ကိုယ် ဘူဖေးပဲ ဘုဉ်းပေးရတယ်တဲ့။ ...း)
ဘုန်းကြီးတွေ ဘူဖေး ဘုဉ်းပေးရတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပူးတေခေါင်းထဲ စဉ်းစားမိတာက ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ တခါထဲ အဝယူသွားပြီး စားမကောင်းလို့ မစားချင်လို့ မကုန်ရင်လဲ မကောင်းပြန်ဘူး၊ တခါတလေကျရင် ဖြစ်တတ်တယ်လေ... ဘုန်းကြီး ဖြစ်ဖြစ် လူပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်နဲ့နာမ်ဆိုတဲ့ ခန္ဓာရှိရင် ဝေဒနာရှိမှာပဲ။ မစားသေးခင်အချိန်မှာ ဒီနေ့တော့ အစားစားချင်စိတ်မရှိဘူးဖြစ်နေလို့ အရင်စားသလောက် မကုန်နိုင်ရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီး စတိသဘောနဲ့ နဲနဲပဲယူသွားလိုက်တယ် ဆိုပါတော့...ပြီးမှ ကပ်ထားတဲ့ ဆွမ်းဟင်းတမျိုးမျိုးကြောင့် ခံတွင်းလိုက်လာတယ်ဆိုရင် ဘုန်းဘုန်းတွေက သင်္ကန်းတလွှားလွှားနဲ့ ဟင်းတွေထားထားတဲ့ နေရာကို ထယူရမှာလား... ဒကာတွေကို ယူပေးပါဦးလို့ ပြောရမလား...ဒါမှမဟုတ် ယူသွားတဲ့ နဲနဲလေးနဲ့ပဲ တော်လိုက်ရမလားလို့။ ပူးတေအသိဥာဏ် သေးသေးလေး ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားမိပြီး ဘုန်းကြီးတွေ ဘူဖေးဘုဉ်းပေးနေတာ မြင်နေရတိုင်း စိတ်မကောင်းဘူး...ဘုန်းကြီးတွေအနေနဲ့ကလဲ အသားကျ အဆင်ပြေနေပြီးသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ...
ပထမဆုံးနေ့ကဆို ပူးတေက ဘုန်းကြီးတွေ ဘုဉ်းပေးလို့ရအောင်လို့ ရန်ကုန်က ငပိရည်ကျိုလေးကပ်တယ်...ငပိရည်ကိုပါ ဘူဖေးဘုဉ်းရမှာမို့ ခုံပေါ်ပဲတင်ထားရမယ်တဲ့။ ပူးတေက ပန်းကန်လုံးအသေးလေးနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးတဲ့ ခုံပေါ်မှာပဲ တင်ထားမှ ဖြစ်မှာပေါ့လို့.. ငပိဆိုတာ နဲနဲလေးပဲ ထည့်ပြီးဘုဉ်းပေးမှ အဆင်ပြေမှာပေါ့လို့။ တခါထဲ အပြီး ငပိရည်တွေကို ထမင်းပေါ်ပုံဆမ်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးလို့ ပူးတေက ထင်မိတယ်။ စီးတီးဟောက မြန်မာဆိုင်တွေမှာတောင် ငပိရေထည့်ဖို့ ကော်ခွက်အသေးလေးတွေ ချထားပေးပြီး အဲဒီကောင်ခွက်လေးလေးကမှတဆင့် လိုသလောက်လေး ထည့်စားရတာမျိုးလေ....
နောက်ပြီး မဟာစည်သြဝါဒခံတဲ့ကျောင်းတွေမှာရှိတယ်။ ဘောဇနဉ် မတ္တဥူ (စာလုံးပေါင်း မှားနေလိမ့်မယ်... ပြောချင်တာက ဘောဇနင် မတ်တင်ညူ ) လက်ရာမကျန်အောင် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးရမယ် လို့ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက တင်းကျပ်စွာ မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရာမကျန်အောင်ဆိုတာက ပန်းကန်ထဲမှာ ထမင်းစေ့လေး တစေ့လေးတောင် မကျန်အောင် ဘုဉ်းပေးရတာပါ...မဟာစည်မှာ ဘုန်းကြီးတွေရော ယောဂီတွေရော ဝေယျာဝစ္စလုပ်တဲ့ လူတွေရော ဒီလိုပဲ ထမင်းတစေ့မကျန်အောင် စားသုံးရပါတယ်။ မဟာစည် ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ကြားခဲ့တာက လူတယောက် ထမင်းတစေ့ လေလွင့်လိုက်ရင် လူပေါင်း ၅ထောင်လောက် လေလွင့်ရင်ကို ထမင်းငတ်နေတဲ့ လူတယောက်စာ ထမင်းရပါတယ်တဲ့။ ဆရာတော်ကြီးက မြန်မာပြည်က လူဦးရေနဲ့ပဲ တွက်ပြထားခဲ့တာပါ။ တကမ္ဘာလုံးက လူတွေအနေနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် ဆရာတော်ကြီး တွက်ထားတာ နဲတောင်မှနဲနေပါသေးတယ်။
ဟိုတလောကတောင်မှ youtube က video file တခုကြည့်လိုက်ရသေးတာထင်တယ်...ထိုင်းက ရိုက်တာထင်တယ်။ KFC မှာ ကြက်ကြော် ပွဲတွေမှာပြီး အများကြီး ချန်ထားခဲ့တဲ့ လူနဲ့ အဲဒီဆိုင်ကနေ ကြက်ကြော် အရိုးတွေ အကြွင်းအကျန်တွေ ကောက်ပြီး အိမ်ရောက်တော့ ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေ စားခါနီးမှာ ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် စားရတာဆိုပြီး သားသမီးတွေကို အရင်ဆုံး ဘုရားကို အောင့်မေ့သတိရခိုင်းတာ။ အဲဒီ youtube video file လေးကြည့်ရတုန်းက ရင်ထဲကို တကယ်လာထိတယ်..
အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဟာမစ်တစ်က မဟာစည်ကြီးက ဆွမ်းစားတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ယောဂီတွေကို သိပ်မတင်းကျပ်တော့ပေမယ့် လှိုင်မဟာစည်ကတော့ မဟာစည်ကြီးကထက်ကို တင်းကျပ်ပါတယ်။ မဟာစည်မှာ ပူးတေရိပ်သာ ဝင်ကာစက first year ကျောင်းပိတ်လို့။ အဲဒီမတိုင်ခင်တွေကတော့ မိုးကုတ်ရိပ်သာမှာပဲ ဝင်ဖူးတယ်... ပြီးတော့ ရွှေတောင်ကုန်းသာသနာ့ရိပ်သာ။ ညနေဘက်စဝင်တာဆိုတော့ ပထမဆုံးနေ့ အတွက် အာရုံဆွမ်းကို နောက်နေ့ မနက် ၆ နာရီမထိုးခင်လောက်မှာ စားရတယ်... ပူးတေက မနက်အဆောကြီးဆို ဘာမှမစားတတ်ဘူး။ အရည်လောက်လေးပဲ သောက်တတ်တာ။ ပထမဆုံးနေ့မှာ ထမင်းနဲ့ ပဲကတီပါပြုတ်ကြော် ပြီးတော့ အချိုပွဲအတွက် ကော်ဖီ ကိတ် ၂ မျိုးလောက် ဘီစကစ် ဒါမျိုးလေးတွေ ချထားတယ်...မစားခင်မှာလဲ ဆရာလေးက ဒီနေ့ ဆွမ်းကို ဘယ်သူတွေကလှူဒါန်းတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အလှူရှင်များကို သာဓုခေါ်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ဆရာလေးက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး မိန့်ကြားခဲ့တဲ့ မကုန်နိုင်ဘူးထင်လျှင် ကြိုတင်ဖယ်ချန်ပြီးတော့ ဘောဇနဉ်မတ္တညူ လက်ရာမကျန်အောင် စားသုံးကြပါလို့ ယောဂီတွေကိုပြောပါတယ်...ပူးတေက အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာလေးပြောသွားတာ သတိမထားမိလိုက်ပါဘူး... စားတဲ့အခါကျတော့ မနက်အစောကြီးကို ထမင်းမစားတတ်တော့ ၂ လုတ် ၃ လုတ်စားပြီးတော့ ဆက်မစားနိုင်တော့ပါဘူး...ဆရာလေးပြောခဲ့တုန်းကလဲ သေချာနားမလည်လိုက်တော့ ကိုယ်မစားခင် ကြိုတင်ဖယ်ထားဖို့ ပေးထားတဲ့ စတီးဇလုံအလွတ်လေးတွေထဲလဲ ကြိုမဖယ်ထားလိုက်မိပါဘူး... ၃ လုတ်လောက်စားပြီးတော့ အချိုပွဲအတွက်တိုက်တဲ့ ကော်ဖီလေးနဲ့ ကိတ်မုန့်လေးတချပ်စားပြီး တရားမှတ်ရမယ့် ဓမ္မာရုံကို ပြန်လာလိုက်ပါတယ်... ဓမ္မာရုံရောက်ပြီး တရားမှတ်လို့ပြီးတော့ အိပ်ဆောင်ပြန်ရေချိုးခါနီးကျတော့ မနက်က ဆွမ်းစားဆောင်ကဆရာလေးက ကြွလာပြီး ပူးတေကို ယောဂီ မနက်က ဆွမ်းတွေ မကုန်ခဲ့ဘူး။ အများကြီး သွန်ပစ်ရတယ် ဆိုပြီးတော့ မနက်က ဆရာလေးပြောတဲ့အထဲမှာ ဘောဇနင် မတ်တင်ညူအကြောင်းကိုသေချာရှင်းပြပါတယ်... ဒါနဲ့ ပူးတေလဲ သေချာနားမလည်မိလို့ြုဖစ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီး နောက်မဖြစ်အောင် လိုက်နာပါမယ်လို့ ဆရာလေးကို ဂတိပေးခဲ့ ပါတယ်... အဲဒီကနေ အခုထိ ပူးတေဟာ တတ်နိုင်သလောက် အစားအသောက်တွေကို မလေလွင့်အောင် စားပါတယ်... ထမင်းဆိုလဲ အရင်စားကောင်းမကောင်း မသေချာရင် နဲနဲပဲထည့်ပြီးတော့ စားပါတယ်။ ကုန်သွားမှ ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ထပ်ဖြည့်ပါတယ်.. ဒီက ဟော်ကာစင်တာတွေမှာ ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်လဲ ထမင်းနဲနဲပဲထည့်ခိုင်းပါတယ်...ဟင်းလဲ ၂ မျိုးလောက်ပဲ တခါတလေ ဗိုက်အရမ်းဆာတဲ့အခါမျိုးမှ ၃ မျိုးလောက်ပဲ ထည့်ခိုင်းပါတယ်.. ထည့်ခိုင်းတာနဲသွားလို့ စားကောင်းလို့ မဝတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်အရမ်းဆာလို့ မဝတာမျိုးဖြစ်ဖြစ် သစ်သီးတမျိုးမျိုး ဒါမှမဟုတ်ရင် အသီးဖျော်ရည်လိုဟာမျိုးတွေ သောက်လိုက်ပါတယ်...တခါတလေ ထမင်းဆိုင်ကချက်ထားတဲ့ ဟင်းတွေတော်တော်များများကို ကိုယ်ကကြိုက်နေတယ် စားချင်နေတယ်... ဗိုက်ကလဲ အကုန်မဆန့်ဘူးလို့ သိတဲ့အခါမျိုးတွေကျတော့ မစ္စတာပီကြီးကို ပူးတေစားချင်တဲ့ဟင်းတွေ ယူချိုင်းပါတယ်... ပူးတေလဲ ပူးတေစားချင်တဲ့ ဟင်းမျိုးယူပြီးတော့ သူ့ထဲက ယူစားပါတယ်.. အရင် အကြောင်းမသိခင်ကဆို သူနဲ့ ပူးတေခဏခဏ စကားပြောရပါတယ်... သူက ကိုယ်စားချင်နေတာပဲ မှာစားလိုက်ပေါ့ ဘာကိစ္စ ဘာကိုနှမြောနေတာလဲ မကုန်နိုင်ရင် ချန်ခဲ့လိုက်ပေါ့လို့ ပူးတေကို အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်..၂၀၀၉ ရန်ကုန်ပြန်တော့ လင်မယား ၂ ယောက် လှိုင်မဟာစည်ကို ၉ ရက်ဝင်ကြပါတယ်.. အဲဒီမှာ သူသိသွားတဲ့အခါကျတော့ ပူးတေအစားအသောက်တွေကို ဘာကြောင့်ချွေတာလဲဆိုတာ သူသိသွားပါတယ်... သူလဲ ပူးတေလောက်ကြီးလိုက်မချွေတာနိုင်ပေမယ့် အရင်လိုတော့ အရမ်းကြီးလေလွင့်အောင် မလုပ်တော့ပါဘူး... အဲဒီမှာချွေတာလိုက်လို့ တနေ့ကို တကျပ်တန်သည် ၂ ကျပ်တန်သည် ပိုထွက်လာတာလေးတွေကိုလဲ ပူးတေတို့ လင်မယား ၂ ယောက်လုံးစုဘူးနဲ့ စုထားပြီး သပ်သပ်လှူပါတယ်..အဓိကကတော့ မြန်မာပြည်က လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေနဲ့ လှိုင်မဟာစည်ကို ပိုလှူဖြစ်ပါတယ်...
(ဖြည့်စွက်ချက်) ဦးဇင်းမုနိန္ဒ လူဝတ်ပြန်ထွက်လာတော့ SMC မှာ ဘုန်းကြီးတွေ (ဆရာတော်ကြီးကအစ) ဘူးဖေးလို ဆွမ်းဘုန်းပေးရတာကို ပူးတေစိတ်မကောင်းဘူးလို့။ ဦးဇင်းမုနိန္ဒရော ဆွမ်းဘုန်းပေးရတာ ဘယ်လိုနေလဲလို့ မပြည့်စုံမှာစိုးတယ်လို့ ပူးတေက မစ္စတာပီကိုမေးကြည့်တော့ သူက အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ ကောင်းပါတယ်တဲ့ ဒီမှာလဲ ဆွမ်းတွေ ဆွမ်းဟင်းတွေ waste မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တဲ့... စလုံးတွေပါ တရားလာထိုင်ကြ ဆွမ်းလာကပ်ကြ သူတို့လဲ ထမင်းစားတယ်ဆိုတော့တဲ့ ဒါမျိုးမှလဲ နိုင်ငံခြားသားတွေပါ ကိုယ့်မြန်မာကျောင်းမှာ တရားလာအားထုတ် ကိုယ့်လူမျိုး ဘာသာကို လေးစားကြမှာပေါ့တဲ့...မဟုတ်ရင်ဆရာတော်တွေ ဘုန်းဖို့ ပန်းကန်တွေနဲ့ကပ်၊ ဆရာတော်တွေ ဘုန်းပြီးလို့ ပိုတာတွေကို လူတွေကိုပြန်ကျွေးမယ်ဆို ကိုယ့်မြန်မာတွေအတွက်က ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် သူတို့တွေက နောက်ဘယ်လာတော့မလဲတဲ့။ သူမိန့်တာလဲ (အဲ သူပြောတာလဲ) ဟုတ်တာပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တလခွဲ(၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လလယ်)လောက် က ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းမှာလဲ ဆွမ်းသွားကပ်တော့ ဆရာတော်တွေက ဘူဖေးလိုတော့ ထယူစရာမလိုဘူး... ဆွမ်းဟင်းပန်းကန်တွေနဲ့တော့ကပ်တယ်... ဒါပေမယ့် ဆရာတော်တွေက ဆွမ်းဟင်းတမျိုးကို တခါပဲခပ်တယ်.. ခပ်ပြီးတာနဲ့ ဘေးနားမှာ ကပ္ပိယတွေက စောင့်နေပြီးတော့ တခွက်ပြီးတခွက် ပြန်ပြန်စွန့်လိုက်ရော နောက်ဆုံးကျတော့ စားပွဲပေါ်မှာ ဆွမ်းဟင်းရည်သောက် ပန်းကန်လေးတွေပဲကျန်ခဲ့တော့တယ်။ အဲဒီပိုကျန်တာတွေကို လူတွေက ဆက်စားကြရတာ.. ဒါမျိုးလေးကို ပိုသဘောကျမိသလိုပဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး... ဒါကတော့ ပူးတေတယောက်ထဲ အမြင်သပ်သပ်ပါ။ အားလုံးကတော့ သာသနာပြုနေကြတဲ့ ရဟန်းဆရာတော်ကြီးတွေပါ.. ပူးတေအားလုံးကို ရိုသေလေးစားပါတယ်.. ဘယ်သူက ကောင်းတယ်..ဘယ်သူကဆိုးတယ်လို့ပြောလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့။ လက်ရှိလဲ ကျောင်းအားလုံးကို အဆင်ပြေသလို အလှူအတန်းရှိတိုင်း အလှည့်ကျသဘောမျိုးနဲ့ ဆရာတော်များကို ပင့်လျှောက်လှူဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်... ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ကျောင်းစွဲ ဒေသစွဲမထားပါဘူး.. အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ မြန်မာပြည်က ကျောင်းတွေ စာသင်ကျောင်းတွေကို ဒီကထက်တော့ ပိုလှူမိပါတယ်လို့။ ကိုးကွယ်မှု ယုံကြည်မှုကတော့ အားလုံးအတူတူပါပဲလို့။
ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပို့စ်လိုဖြစ်နေတော့ ရေးရတာနဲနဲလန့်တယ်... ကိုယ်ဆိုလိုချင်တာတမျိုး စာဖတ်သူ ရသွားတဲ့ message က တမျိုးဖြစ်မှာကြောက်တယ်..
အားလုံးပဲ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်...အရင်က အစားအသောက်တွေကို သတိမထားမိပဲ အလေအလွင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ဖူးကြတယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ကစလို့ နဲနဲ နဲနဲစီ သတိထားပြီး မလေလွင့်အောင် ဂရုစိုက်ပြီး မစားနိုင်တဲ့ လူတွေကို ကျွေးကြရအောင်နော်... :D
Please Do not waste the food, A lot of people are hungry in the world.
Posted by ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ at 3:41 AM9comments
ဧပရယ်လ်ပူးနော် ။ ဧပရယ်လ်ဖူးလ်နဲ့ မမှားနဲ့ဦး။ တခုသော April လရဲ့  သောကြာနေ့မှာမွေးတဲ့ ပေပေတေတေ ပူးတကောင်မို့ ဧပရယ်လ်ပူး@ပူးတေ လို့ပေးလိုက်တာပါ ။ ဆရာဝန်နဲ့ ကုလို့မရတဲ့ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် မတတ်တခေါက်နဲ့ ဒီဘလော့လေးကို ဖန်တီးပြီး ကိုယ့်ရောဂါ ကိုယ် ကုသဖို့ ကြိုးစားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါကတော့ တော်တော်လေးရင့်နေပါပြီ။ ကျွမ်းတဲ့အဆင့်တောင်မှ ရောက်နေပါပြီ။ အခုမှ စပြီးတော့ ကုရမှာ။ ဆေးမှမှီသေးရဲ့လား မသိပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးညွှန်းလေးတွေရှိရင် အကြံပြု လမ်းညွှန်ပေးကြဦးနော်.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
62%How Addicted to Blogging Are You?
မေ့လျော့မှု ( အ၀ိဇ္ဇာ ) ကြောင့်
၆ ကြိမ်မြောက် အလှူ
တိုးတတ်လမ်းစ သို့မဟုတ် ခြေတလှမ်းအယုတ် - စီးပွားရေး တွေ အလုပ်မဖြစ် ဒေါ်လာဈေးတွေ မတန်တဆ ဖြစ် အိမ်ယာတွေ ရောင်းမရ ကွန်ဒို ဆိုတာကို မြေယာ အချိုးကျနဲ့ တိုင်းတပါးသား ကို ရောင်းဖို့ လုပ်တာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆ...
ဘယ်သူက ပိုအရေးကြီးသလဲ - သင့်မှာ ရန်သူတွေရှိနေတာ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါတယ် သူတို့ကြောင့် သင့်ကိုချစ်ခင်သူတွေကို ပိုတန်ဖိုးထားတတ်လာလို့ ။ သင့်ကို မနာလိုသူတွေရှိနေတာ ကျေးဇူးတင်စရ...
11.07.2017 - သမီး ကြီး ကို မန်းလေးကပြန်ခေါ်လာ ဒုတိယသမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရှိလာ ။ သမီးကြီး စနိုး စကားမပြောသေး လို့ kk hospital ကို အခါခါသွားရ ။ ကလေး စကားမပြောတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြ...
ဖူးနုသစ် - ZT
အဖြူရောင် အိန်ဂျယ်လ်လေး နမ်းမဝ
မျောလွင့်တိမ် တို့ နားခိုရာ....(မောင်လေး)
မသစ်သစ်ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက အသစ်များ
Standard Method of Detailing Structural Concrete (ebook) - အင်း... အလုပ်မအားလို့ ဘလော့ဖက် မလှည့်ဖြစ်တာ ၆လတောင်ကျော်သွားတယ်... ဒီနေ့တော့ အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ ebook လေးနှစ်ခု Mediafire ကနေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ISE - Stand...
အရက်နာကျခြင်း - ဒီဘက်မှာ လတိုင်းရေးထားတာတွေတင်ဖို့ကိုပဲမေ့မေ့နေတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကိုတော့ ယမကာလုလင်လေးများ၊ယမကာလုလင်ကြီးများ၊ အရက်သမားပျိုလေးများနဲ့ အရက်သည်သာအမိ၊အရက်သည်သာအဖမျ...
MY NAME IS “NAN MA WA”
HEAL MYANMAR မင်းဓမ္မ အင်တာနေရှင်နယ်
ဘု၇ားမြတ်စွာကိုပင် အံတုလို့ လာ သို့ ပါသော်လဲ ဆင်မိုက်ကြီးမှာ ဒူးတုတ်ရရှာ...SUDDEN CHANGE IS COMING TO MYANMAR...I HOPE FOR THE BEST BUT I AM PREPARED FOR THE WORST....ရွှေမှောင်ဝေကင်း ငွေအဆင်းဆန္ဒ ပြည်ထောင် တိုင်းမြန်ပြည် အေးမြ အောင်စု...အဆင်ပြေ မြင်၇သူကြည်နူးလောက်ပေ.....ဇာမဏီတန်ခိုးနဲ့အမျိုးဂုဏ်တက်စေမည်...တက်လူတွေ တက်လူတွေ လုံ့ လ၀ိရိယ ရှိကြစေ မျိုးဂုဏ်တက်အောင်ရွက်ပါလေ တို့ တာဝန်ပါလေ...မူးယစ်ဆေးဝါးတို့ မလိုလား....တရားသော တို့ စစ်ရဲ ၀ံ့ဆင်နွှဲမည်...လူထုအားကို အများကြီးလိုတယ် ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာရှိသည်..၂၁ နှစ်တောင် စောင့်ခဲ့ပြီးပြီ ခဏလေး သည်းခံပြီး စောင်ပေ့းကြပါ...ဓမ္မကို ယုံကြည်အားထားသောသူအား ဓမ္မက ပြန်ပြီး စောင့်ရှောက်မည်......Heal Myanmar without dictators, corrupted politicians and money masters for you for me and the entire human race....If you illegally enter Myanmar you can get3years in prison. If you enter GERMANY illegally, you get free housing, medical care, money and anything else they demand you to have. တစ်ပါတီကို ကြိုးနီပတ်လို့ရပ်ရပ်ရပ်